ISIOKWU TETA! A Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
Ịmụmụ Ọnụ Ọchị Bụ Onyinye I Kwesịrị Ịna-enyetụ Ndị Ọzọ
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ite Ime
“Ụdị Ịhụnanya Ha Nwere n’Ebe Anyị Nọ Metụrụ Anyị n’Ahụ́”
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Di na Nwunye Ga-esi Na-ekele Ibe Ha Maka Ihe Ọma Ha Mere
WAS IT DESIGNED? Ihe Nwa Ahụhụ A Na-akpọ Silver Ant Na-eji Egbochi Okpomọkụ
Teta! | Nke 1 n'Afọ 2017
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
OTU onye na-eto eto aha ya bụ Anna * kwuru, sị: “Obi daa m mbà, anaghịzi m enwe mmasị ime ihe ọ bụla, ma ihe ndị m na-enwebu mmasị ime. Naanị ihe m na-enwezi mmasị ime bụ ihi ụra. Ọ na-adịkarị m ka o nweghị onye hụrụ m n’anya, na o nweghizi uru m bara, nakwa na m bụụrụ ndị ọzọ nsogbu.”
Onye na-eto eto ọzọ aha ya bụ Julia kwuru, sị: “M nọ na-achọ igbu onwe m. Ma n’eziokwu, achọghị m ịnwụ. M chọrọ ka ihe a na-eme m kwụsị. Abụ m onye hụrụ ndị ọzọ n’anya. Ma, obi daa m mbà, o nweghịzi ihe m na-eji ha akpọrọ.”
Anna na Julia bidoro ịda mbà n’obi mgbe ha dị ihe dị ka afọ iri na anọ. Ọ bụ eziokwu na ndị na-eto eto ndị ọzọ na-ada mbà mgbe ụfọdụ, ma Anna na Julia na-ada mbà ruo ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa. Anna kwuru, sị: “Ọ na-adị m nnọọ ka m̀ nọ n’ime olulu gbara ọchịchịrị nke m na-enweghị ike isi na ya pụta. Ọ na-adị m ka isi ọ̀ na-achọ imebi m.”
Ihe a na-eme Anna na Julia na-emekwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe ndị na-eme eme gosiri na ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-ada mbà n’obi na-akarịzi akarị. Ngalaba Òtù Mba Ụwa nke Na-ahụ Maka Ahụ́ Ike kwuru na “ihe kacha akpata ọrịa na nsogbu ndị ọzọ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ n’agbata afọ 10 na 19 na-enwe” bụ ịda mbà n’obi.
Ihe ndị na-egosi na mmadụ ga-ada mbà n’obi nwere ike ibido mgbe onye ahụ ka dị obere. Ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ ehighị ụra nke ọma, erighị nri nke ọma, ibu ibu ma ọ bụkwanụ ịta ahụ́. Obi nwekwara ike ịna-ajọ onye ahụ njọ, ya ana-echekwa na o nweghịzi uru ya bara. Ihe ndị ọzọ e jikwa ama ya bụ onye ahụ ịna-akpa iche, ịna-echefukarị ihe, anya erughị ala, onye ahụ ịchọ igbu onwe ya na ihe ndị ọzọ. Ndị dọkịta chọọ ịmata ma mmadụ ò nwere ụdị nsogbu a, ha na-ele ma ò nwere ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ e ji amata onye na-achọ ịda mbà n’obi na-eme onye ahụ ruo ọtụtụ izu, nakwa ma ihe ndị ahụ ọ̀ na-egbochi ya ime ihe ndị ọ na-emebu.
IHE NDỊ O NWERE IKE ỊBỤ HA NA-AKPATA ỊDA MBÀ N’OBI
Ngalaba Òtù Mba Ụwa nke Na-ahụ Maka Ahụ́ Ike kwuru “na ihe na-akpata ịda mbà n’obi bụ ihe ndị na-eme gburugburu mmadụ, ihe na-eme n’ụbụrụ ya, na ihe na-eme ya n’ime ahụ́.” Ka anyị kọwaa ụfọdụ n’ime ha.
Ihe ndị dị n’ime ahụ́. Ọtụtụ mgbe, ịda mbà n’obi na-esi n’ezinụlọ, dị ka ọ dị n’ezinụlọ Julia anyị kwuru okwu ya ná mmalite. Ihe a gosiri na ịda mbà n’obi nwere ike ịdị n’ọbara ezinụlọ ụfọdụ nke nwere ike ịna-akpaghasị ụbụrụ ndị ezinụlọ ahụ. Ihe ndị ọzọ nwekwara ike ịkpata ya bụ ọrịa obi, mgbanwe ndị na-eme n’ahụ́ mmadụ na iṅụ ọgwụ ọjọọ. Ọ bụrụgodị na ịṅụ ọgwụ ọjọọ akpataghị ya, o nwere ike ime ka nke dị adị ka njọ. *
Ndọga na nchekasị. Ọ bụ eziokwu na mmadụ ịdọgatụ obere ndọga adịghị njọ, ma ya karịzie akarịa, o nwere ike ịkpatara mmadụ ụdị nsogbu dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ime ka onye na-eto eto ahụ́ ya na-esichaghị ike ibido dawa mbà n’obi. Ma, n’agbanyeghị ihe ndị a anyị kwuru, ihe ndị na-akpata ịda mbà n’obi edochabeghị anya, o nwekwara ike ịbụ na ọ bụ ọtụtụ ihe na-agbakọ aka akpata ya.
Ihe ndị na-akpata nchekasị ndị na-eme ka mmadụ daa mbà n’obi bụ nne na nna mmadụ ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ tisaa, ọnwụ mmadụ, iti ihe ma ọ bụ ndina n’ike, ihe mberede okporo ụzọ, ọrịa ma ọ bụ enweghị isi akwụkwọ. Ọ na-aka njọ ma ọ bụrụ na nwata ahụ e chewe na ndị mmadụ ajụla ya. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata ya bụ nne na nna ịna-atụ anya ihe nwa ha na-agaghị emeli, dị ka ịbụ nwa ụbụrụ kacha aghọ nkọ n’ụlọ akwụkwọ. Ihe ndị ọzọ bụkwa ịchọ ụmụaka okwu, ịtụ ụjọ ọdịnihu, nne na nna ịgbahapụ ụmụ ha n’ihi nsogbu. Ọ bụrụ na onye na-eto eto adaa mbà, olee ihe ndị nwere ike inyere ya aka inweta onwe ya?
NYERE ONWE GỊ AKA
Ndị dara mbà nwere ike ịṅụ ọgwụ ma ọ bụ nweta enyemaka n’aka ndị dọkịta. * Jizọs Kraịst sịrị: “Mkpa ọgwọ ọrịa adịghị ndị ahụ́ dị mma, kama mkpa ya dị ndị na-arịa ọrịa.” (Mak 2:17) Ọrịa nwere ike ịbịa anyị n’akụkụ ahụ́ anyị ọ bụla, ma n’ụbụrụ. Ịgbanwe otú anyị si eme ihe nwekwara ike ịba uru n’ihi na ahụ́ anyị na uche anyị na-arụkọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ada mbà n’obi, gbalịa hụ na i mere ihe ndị i kwesịrị ime ka ahụ́ dị gị mma. Dị ka ihe atụ, na-eri nri nke ọma, na-ehi ụra nke ọma, na-emegakwa ahụ́. Mmega ahụ́ na-eme ka mmadụ na-enwe obi ụtọ, nwee ume, na-ehikwa ụra nke ọma. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, chọpụta ihe ndị na-egosi na obi achọwala ịda gị mbà, kpebiekwa ihe ndị ị ga-eme iji gbochie ya. I nwere ike ịkọrọ onye ị tụkwasịrị obi ihe gị na ya na-alụ. Ndị enyi gị na ndị ikwu gị nwere ike inyere gị aka inwetaghachi onwe gị ma obi chọwa ịda gị mbà. Detuo ihe ndị na-agbata gị n’uche ma obi chọwa ịda gị mbà. Ọ bụ ihe nyeere Julia anyị kwuru okwu ya ná mmalite aka. Ma, nke kachanụ bụ ịgba mbọ mee ka mmekọrịta gị na Chineke sikwuo ike. Ọ ga-enye aka mee ka ndụ tọwakwa gị ụtọ ọzọ. Jizọs Kraịst kwuru, sị: “Obi ụtọ na-adịrị ndị maara mkpa ime mmụọ ha.”—Matiu 5:3.
Na-eri nri nke ọma, na-emega ahụ́, na-ehikwa ụra nke ọma
Ime ihe ndị gbasara ofufe Chineke nwere ike ime ka inweta nkasi obi
Anna na Julia kwuru ihe gosiri na ihe a Jizọs kwuru bụ eziokwu. Anna kwuru, sị: “Ime ihe ndị gbasara ofufe Chineke na-eme ka m na-eche banyere ndị ọzọ, ọ bụghị ịna-eche naanị banyere nsogbu m. Ọ naghị adịcha mfe mgbe niile, ma, ọ na-eme m obi ụtọ n’ikpeazụ.” Ikpe ekpere na ịgụ Baịbụl na-eme ka Julia nweta nkasi obi. Ọ sịrị: “Ịkọrọ Chineke obi m na-eme ka obi ruo m ala. Baịbụl na-enyekwara m aka ịma na m bara uru n’anya Chineke, nakwa na ihe banyere m na-emetụ ya n’obi. Ịgụ Baịbụl na-emekwa ka m nwee olileanya.”
Ebe ọ bụ Jehova Chineke kere anyị, ọ maara anyị nke ọma. Ọ maara otú e si zụọ anyị, ihe ndị merela anyị, nakwa otú ebumpụta ụwa anyị si na-akpa anyị aka ọjọọ. N’ihi ya, ọ ga-enyeliri anyị aka, kasiekwa anyị obi. O nwere ike iji mmadụ ibe anyị hụrụ anyị n’anya meere anyị ihe ndị a. Ma, oge na-abịa mgbe Chineke ga-agwọ anyị ọrịa niile na-enye anyị nsogbu, ma ịda mbà n’obi. Aịzaya 33:24 sịrị na “ọ dịghị onye bi na ya nke ga-asị: ‘Ana m arịa ọrịa.’”
Baịbụl kwere anyị nkwa na Chineke “ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya [anyị], ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ.” (Mkpughe 21:4) N’eziokwu, okwu ndị ahụ na-akasi anyị obi. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu gbasara ihe Chineke bu n’obi kee ụwa a, keekwa ụmụ mmadụ, biko gaa n’adres Ịntanet anyị bụ́ jw.org/ig. Ị ga-enwe ike ịnọ ebe ahụ gụọ Baịbụl na akwụkwọ ndị ọzọ kwuru gbasara ihe dị iche iche, ma ịda mbà n’obi.
^ para. 3 Aha a kpọrọ ndị mmadụ n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
^ para. 10 E nwere ọtụtụ ọrịa, mkpụrụ ọgwụ, na ọgwụ ọjọọ ndị nwere ike ịkpaghasị mmadụ uche. Ọ bụ ya mere mmadụ kwesịrị iji ṅụọ naanị ọgwụ dọkịta gwara ya ṅụọ.
^ para. 14 Teta! anaghị ekwu ọgwụ ka mma a ga-eji gwọọ mmadụ ma ọ bụ otú ka mma a ga-esi gwọọ mmadụ.
Ihe Ndị Nne na Nna Nwere Ike Ime
Ọ ga-adị mma ka unu buru n’uche na ọ gaghị adịrị ndị na-eto eto dara mbà n’obi mfe ịkọrọ unu obi ha. O nwere ike ịbụ na ha amaghị ihe ha na ya na-alụ ma ọ bụ ihe na-egosi na mmadụ achọwala ịda mbà.
Otú ndị na-eto eto na-esi eme ka a mata ihe dị ha n’obi dị iche n’otú ndị dimkpa na-esi eme nke ha. Ihe a kwesịrị ime ka ndị nne na nna na-eleru anya ka ha mata mgbe àgwà nwa ha, otú o si eri nri, otú o si ehi ụra, na mmekọrịta ya na ndị ọzọ bidoro ịgbanwe. Nke ka nke, ma mgbanwe a nọruo ọtụtụ izu.
Ejila ihe ọ bụla nwa gị kwuru ma ọ bụ mee nke gosiri na ọ na-achọ igbu onwe ya gwuo egwu.
Ị chọpụta na nwa gị dara mbà n’obi n’eziokwu, lee ma ị̀ ga-akpọrọ ya gaa hụ dọkịta.
Nyere nwa gị aka ịna-eme ihe ndị dọkịta sịrị ya na-eme. Ọ bụrụ na ọ naghị aka mma, ma ọ bụkwanụ na e nwere ihe ọzọ ọ kpataara ya, gaakwa kọọrọ dọkịta ahụ.
Hazie oge ezinụlọ unu ga-eji na-eri nri, na-emega ahụ́, ma na-alakpụ ụra.
Mee ka gị na nwa gị na-ekwurịta okwu nke ọma. Nyekwara ya aka ka ọ ghara ịna-enye onwe ya nsogbu maka otú ndị ụfọdụ si akpapụ ya iche n’ihi ihe na-eme ya.
Ebe ọ bụ na owu na-amakarị ndị dara mbà n’obi, ihere ana-emekwa ha, ma ọ bụkwanụ ha ana-eche na o nweghị uru ha bara, na-egosi ha mgbe niile na ị hụrụ ha n’anya.
Nwee Ebe I Tinyere Ihe Dị Iche Iche Ga-eme Ka Obi Na-adị Gị Mma
Ọ bụrụ na ị na-adakarị mbà, ihe ga-enyere gị aka bụ inwe ebe i tinyere ihe dị iche iche ga-eme ka obi na-adị gị mma. I nwere ike ịhazi ya ka ọ dị otú ị chọrọ. I nwere ike itinye ya ihe ndị a e sere ebe a:
Adres na akara ekwentị ndị i nwere ike ịkpọ mgbe ọ bụla obi jọwara gị njọ
Egwú ndị dị mma na-akacha amasị gị
Okwu ndị ọzọ kwuru na isiokwu ndị ị gụrụla gbara gị ume
Amaokwu Baịbụl ndị na-agba ume, dị ka Abụ Ọma 34:18; 51:17; 94:19; na Ndị Filipaị 4:6, 7
Ihe ndị ga-enyere gị aka icheta ndị hụrụ gị n’anya
Akwụkwọ ebe i dere ihe ndị merela gị obi ụtọ n’ime ndụ gị
Ịda Mbà n’Obi Ụmụ Agbọghọ Ndị Na-eto Eto
Ihe ndị na-eme eme gosiri na ụmụ agbọghọ na-aka ada mbà n’obi karịa ụmụ okorobịa. Otu ihe na-akpata ya nwere ike ịbụ na a na-achọkarị ha okwu, na-akụ ha ihe ma ọ bụ na-egwusa ha egwuregwu iberiibe. Otu onye ọkachamara aha ya bụ Sharon Hersh sịrị: “Mgbe ha na nsogbu a na-enye ha na-alụ, ha na nsogbu ndị nke ha bu pụta ụwa ana-alụkwa, mkpaghasị ahụ́ ọ na-ebutere ha na-akarị akarị.” Ihe ọzọ na-akpakwa ụmụ agbọghọ aka ọjọọ bụ ịchọ ka ahụ́ ha dị ka nke ụmụ nwaanyị ha na-ahụ na fim ma ọ bụ na tiivi. Ụmụ agbọghọ ọdịdị ha na-echu ụra, ma ọ bụkwanụ ndị nke na-echegbu onwe ha ma ndị ọgbọ ha ọ̀ ga-anabatakwa ha, na-akacha ada mbà n’obi. *
^ para. 44 Gụọ isiokwu bụ́ ““Ihe Baịbụl Kwuru—Mma Elu Ahụ́.” Ọ gbara na Teta! Nke 4 2016.
Ahụ́ Ike Udo na Obi ụtọ
Nke 1 n'Afọ 2017 | Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
TETA! Nke 1 n'Afọ 2017 | Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ịda Mbà?